ग्रिन्डेलवाल्ड, स्विजरल्याण्डमा | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | पर्यटन गन्तव्यहरू, स्विट्जरल्याण्ड
स्विट्जरल्याण्ड यो पोष्टकार्ड देश हो। सुन्दर तालको दृश्यहरू, रमणीय गाउँहरू, सफा शहरहरू, शिक्षित नागरिकहरू, यातायातको राम्रो साधन ... यदि तपाईं पहिले नै स्विजरल्याण्ड जान्नुहुन्छ भने, तपाईं जहिले पनि फर्कने चाहानुहुन्छ, यदि तपाईंले अहिलेसम्म आनन्द लिनुभएन भने, यो समय यो सानोमा यात्रा गर्ने योजना छ तर युरोप मा आकर्षक देश।
र यहाँ स्विट्जरल्याण्डमा सिफारिस गरिएको गन्तव्य मध्ये एक हो Grindelwald, एक आकर्षक गाउँ बर्नको क्यान्टोनमा।
2 ग्रिन्डेलवाल्ड पर्यटन
3 के ग्रिन्डेलवाल्ड मा के सम्झना छैन
हामीले भन्यौं कि त्यो गाउँ बर्नको शिविरमा छ। स्विजरल्याण्ड क्यान्टनमा विभाजित छ, कुल २,, जसले स्विस कन्फेडेरेसन बनाउँछ। यी प्रशासकीय उप-विभाजनहरू हुन् र शब्द आफैं १ 26 औं शताब्दी फ्रेन्च शब्दबाट आएको हो।
बर्न क्यान्टोनको सन्दर्भमा, यो १ 1353 देखि यता संघको हिस्सा भएको छ र यसको राजधानी उही नामको शहर हो। दूरी यो मध्यस्थता गर्दछ बर्न र ग्रिन्डेलवाल्ड बीच करिब 75 XNUMX किलोमिटर छ, त्यसैले एक घण्टा मा तपाईं सजिलै कार द्वारा आफैलाई कवर गर्न सक्नुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा, त्यहाँ बस र ट्रेन सेवा पनि छन्। तपाईं बर्नबाट रेलमा त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ, तिनीहरू इन्टरलाकेनका लागि बाध्य सेवाहरू हुन्।
Grindelwald यो पुरानो गाउँ होजुन १२ औं शताब्दीमा पहिलो पटक आधिकारिक कागजातहरूमा देखा पर्दछ, तर वास्तविकतामा यो क्षेत्र नियोलिथिक समयमा पहिल्यै कब्जा गरिएको थियो, जुन पुरातात्विक खोजहरूले प्रमाणित गर्छ। रोमीहरू पनि यहाँबाट पार भए र मध्य युगमा बस्तीहरूले अझ ठूलो रूप लिए।
राजा कोनराड तृतीयको समयमा, १२ औं शताब्दीमा, अन्तरजातीय मठलाई जग्गा दिइयो र यी सम्पत्तिहरू पछिल्ला शताब्दीमा बढेको थियो। गाउँले र कुलीन वर्गको स्थानीय प्रतिरोधको बावजुद धार्मिक शक्ति महान थियो। प्रोटेस्टेन्ट सुधारको साथ मठ र गाउँ आफैंमा सेक्युलराइज गरिएको थियो, तर हामी पहिले नै १ XNUMX औं शताब्दीको कुरा गर्दैछौं।
यी सबै ईतिहासहरू विभिन्न निर्माणहरूमा देख्न सकिन्छ जुन समय बित्दै जान सजिलो भयो १ tourism औं शताब्दीमा सुरु भएको पर्यटन, कदर गर्न सिके। सत्य यो हो कि एक सुन्दर गाउँ, धेरै रमणीय, र चित्रकला, पोस्टकार्ड र फोटोहरू जुन यसलाई समयको रूपमा चित्रित गरियो यसले यसको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिमा योगदान पुर्‍यायो।
क्षेत्र मा कुल सात नगरपालिका छ, तर मुटु पर्यटक Grindelwald हो। यो गाउँमा पहाडहरू यसको वरिपरि थिए, एघार कुलमा, यहाँ र त्यहाँ, विभिन्न उचाइहरूको। त्यहाँ जs्गली जमिनहरू र कृषिलाई समर्पित जमिनहरू छन्, जस बीच मार्गहरू, सडकहरू, नदीहरू र तालहरू मिश्रित छन्।
धेरै मानिसहरू जर्मन बोल्छन्यद्यपि दोस्रो सबैभन्दा व्यापक रूपमा बोलिने भाषा पोर्तुगाली हो। केवल पछि फ्रान्सेली आउँछ। मौसम कस्तो छ? राम्रो जुन एक वर्षाको महिना हो र सबैभन्दा शुष्क महिना फेब्रुअरी हो। स्पष्ट रूपमा, जाडो हिउँ र चिसो छ।
कुनै पनि हिमाल गन्तव्य जस्तो त्यहाँ दुई धेरै बलियो मौसमहरू छन्: जाडो र गर्मी। जाडोमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्की त्यहाँ दुई स्की क्षेत्रहरू छन्, क्लाइन स्किडेग - म्यान्लिचेन - वेन्जेन र प्रथम। कुल मा छन् २ facilities०० मिटरको उचाईमा facilities० सुविधाहरूसहित १ kilometers० किलोमिटर ढलानहरू। र अझ बढि, यदि हामी गयौं भने २ 2971 XNUMX१ मिटरको साथ शिलथर्न छ।
स्कीइंग बाहेक तपाई सक्नुहुन्छ जाडोमा हिंड विशेष उपकरणको साथ, र त्यहाँ को लागी छ Kilometers० किलोमिटर बिभिन्न मार्गहरू। सडकहरू पहाडहरूमा गहिरो जान्छन् हजारौं मिटर उचाइबाट परिदृश्यको दर्शनीय दृश्यहरू दिँदै, हिमनदीहरू, वा टोबोगन, kilometers० किलोमिटर दौडेर ... हिउँदको जाडो आकाशमा पूरा दिन बिताउन चाहनेहरूका लागि एक चमत्कार।
पछि ग्रीष्म itतुमा यो पैदल यात्रा गर्न सल्लाह दिइन्छ। राम्रो जुत्ता र खानाले आफैलाई सुसज्जित गर्नुहोस् र सूर्य र हिमालहरूको आनन्द लिन बाहिर निस्कनुहोस्। त्यहाँ छन् सडकको kilometers०० किलोमिटर लागि पैदल यात्रा गर्नेहरूती मध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय ग्रिन्डेलवाल्डलाई जोड्ने एक हो - पहिलो फाउहोर्न पर्वतीय होटेल, बाछालप्सी ताल द्वारा भुनाउने। अर्को सिफारिश गरिएको पैदल यात्रा, यदि तपाईं पहाडहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, मुन्लिचेनबाट क्लाइन स्किडेगसम्म पुग्नु हो किनभने तपाईंसँग जf्गफ्राउ, मौंच र आइगर पर्वतहरूको दर्शनीय दृश्य छ।
के ग्रिन्डेलवाल्ड मा के सम्झना छैन
यो हिमाली गाउँ र यसको वरपरको प्रस्ताव छ कि सबै को लागी, हामी सबै भन्दा राम्रो को एक सारांश बनाउन सक्छौं। श्वार्जोर्नको शीर्षमा चढ्नुहोस् यो सुझाव छ। एउटा गन्डोलाले तपाईंलाई ग्रिन्डेलवाल्डमा आफैं लिन्छ र त्यसपछि माथिपट्टि, तपाईं यस मार्फत हिंड्न सक्नुहुन्छ पहिलो क्लिफ वाक। यो पहाडमा जोडिएको एउटा धातु पैदल मार्ग हो जुन 45 XNUMX मिटर प्रोजेक्ट गर्दछ। ती दृश्यहरूको कल्पना गर्नुहोस्! दूरीमा तालहरू, हिमाल पर्वतहरू, अल्पाइन चराहरू ...
त्यसो हो पहिलो उडान यो 800०० किमि प्रति घण्टाको औसत गतिको साथ meters०० मिटर लामो यात्रा गर्दछ, तर यो केवल एड्रेनालाईनको ठूलो शटको आनन्द लिनेहरूको लागि हो। सबै कुरा हिड्ने र को उपयोग संग संयुक्त छ trottibike, स्कूटर र साइकलको क्रसरोड।
पहिलो बाट तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ २,२ha2265 मिटर उचाईमा, बेचलपसी ताललाई चिन्नुहोस्क्रिस्टल सफा पानीसँग, वरिपरि झीलको परिदृश्यलाई दर्पण गर्दै। हाईक हल्का छ र त्यहाँ धेरै वनफ्लावरहरू छन् यदि तपाईं गर्मीमा जानुहुन्छ। र तल तल पनी तपाईं पहिले अर्को मार्ग लिन सक्नुहुन्छ र Grosse Scheidegg मा जानुहोस्, चरागाह, गाईवस्तु, झरना र हिमनदी बीच यात्रा को लागी एक आदर्श गन्तव्य।
जंगफ्राउजोच ग्रिन्डेलवाल्ड ग्रुन्डमा क्लाइन स्किडेगको तर्फ ट्रेन लिन आवश्यक छ। त्यहाँ तपाईंले ट्रेनहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेछ र लिनुपर्नेछ संसारमा सब भन्दा उच्च उचाइ ट्रेनवा त्यो एक हो जुन तपाईंलाई 3.454 XNUMX। मिटर उचाईमा पुर्‍याउँछ। ट्रेन २०० 1912 को मिति र त्यो केवल विस्मयकारी छ किनभने अन्तिम सत्रहरूमा तपाईले अलेच ग्लेशियरको साथ सामना गर्नु भएको छ। ¿यूरोपको शीर्ष? हुनसक्छ र यदि तपाईं केहि बढी जान चाहनुहुन्छ भने तपाईं मा जान सक्नुहुन्छ स्फिंक्स वेधशाला जहाँ ºº०º अवलोकनहरू छन्।
A नर यो ग्रन्ड स्टेशनबाट गोन्डोलाबाट पुग्छ। यात्राले तपाईलाई छोड्छ 1.300 मीटर र यो आफैंमा एउटा साहसिक कार्य हो किनकि यो विश्वमा आफ्नो प्रकारको तेस्रो सबैभन्दा लामो केबलवे हो। आधा घण्टा मा तपाईं परिदृश्य को मजा लिन को लागी हुनुहुन्छ। यदि तपाईं मध्य जुनमा जानुहुन्छ भने, फूलहरू र हरियाली प्रशस्त छन् र एकचोटि तपाईं शीर्षमा पुग्नुभयो भने, विचार धेरै राम्रो स्थान बिन्दु मध्ये एक खोज्नु हो।
यी गन्तव्यहरूमा हामी थप्न सक्छौं Pfingsteggगर्मीमा। यो ग्रिन्डेलवाल्डबाट केहि मिनेटमा छ र राम्रो विचारहरू छ र प्रख्यात स्लाइड जुन 736 XNUMX मीटर लामो छ र meters० मिटरको ठाडो ड्रप। यहाँ कुनै पनि हिंड्न ले तपाईंलाई लिन सक्छ grindelwald हिमनदी 90 ० मिनेट हिंडाईमा। अर्को उत्कृष्ट बृद्धि हो इइजर ट्रेल, छ किलोमिटर जुन तपाईंलाई आइगरको उत्तर अनुहारमा लैजान्छ।
यो गर्नको लागि तपाईंले जf्गफ्राउ ट्रेनलाई इइग्लगस्चरमा लिनुपर्नेछ र पानी, खाना, टोपी र दूरबीनहरू बिर्सनुहोस्। छ किलोमिटर Alpiglen स्टेशन मा शुरू र तपाईं लगभग दुई घण्टा मा यो। कहिलेकाँहि यो केहि गाह्रो हुन्छ तर त्यहाँ सडकको छेउमा तिनीहरूबाट लिन डोरीहरू छन्।
मेरो लागि Gletscherschlucht यो सूचीमा हुनु पर्छ। यो एक को बारे मा छ खोला यो लुक्ने ठाउँ हो र १० मिनेट मात्र ग्रिन्डेलवाल्ड स्टेशनबाट। त्यहाँ पदयात्रा र ट्रेल्स छन् र गर्मी मा त्यहाँ छ माकुराको जालो जुन पानीको प्रवाहमा निलम्बन गरिएको नेटवर्क हो। सडकहरू खोलामा एक किलोमिटर जान्छन्।
र अन्तमा, यदि तपाईं हिंड्न चाहानु हुन्न र तपाईं बाइक फ्यान हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई भन्नेछु ग्रिन्डेलवाल्डको रेल र केबवेहरू साइकलका लागि अनुकूलित छन्, त्यसैले गर्मीमा यस ठाउँ घुम्ने र रमाईलो गर्ने सम्भावनाहरू विस्तार हुन्छन्। स्पाको प्रस्ताव र ग्रिन्डेलवाल्ड संग्रहालय जोड्नुहोस् र यात्रा पूरा भयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » स्विट्जरल्याण्ड » ग्रिन्डेलवाल्ड, स्विजरल्याण्डमा
अस्टुरियसमा ग्रामीण भाग्ने